डा. भगवान् कोइरालाको टोली जुम्लामा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
डा. भगवान् कोइरालाको टोली जुम्लामा
चैत्र २३, २०७४ एलपी देवकोटा
जुम्ला — कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पहिलो पटक मुटुरोग विशेषज्ञ सेवा सुरु भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालासहित चिकित्सकको टोलीले जुम्लाका मुटुरोगीको लागि नि:शुल्क शिविर सञ्चालन गरेको छ ।
यसअघि मुटुरोगीहरुले उपचारका लागि महँगो शुल्क तिरेर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर, जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ टोली ल्याएर सेवाप्रवाह भएपछि केही समस्या कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
मुटु रोग विशेषज्ञ सेवा दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । जुम्लाका मुटु रोग भएका बिरामीको उपचारका लागि मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कोइरालाको टिमलाई अनुरोध गरिएको थियो । हाल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा मुटु रोगको विशेषज्ञ नहुँदा उपचार हुन सकेको थिएन । मुटु रोग विशेषज्ञको टोलीले जुम्लामा उपचार गर्न सकिने बिरामीलाईको जुम्लामै उपचार गर्ने र रेफर गर्ने बिरामीलाई उचित सुझाव दिएर उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जान परामर्श दिईने शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ । ‘जुम्लामा मुटुरोगी र औषधि सेवन गर्नेको संख्या धेरै छ,’ शिक्षण अस्पताल जुम्लाका निर्देशक धर्मराज गोसाईले भने, ‘नि:शुल्क मुटुरोग स्वास्थ्य शिविरमार्फत बिरामीलाई उपचार गर्न थालिएको हो ।’
जिल्लामै मुटु रोग विशेषज्ञको टोली पुगेर जाच गर्न पाउँदा स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मका मुटुरोगीले नाम दर्ता गराएका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका-६ की बविता शाहीले आँगनमै विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा पाउँदा खुसी भएको बताइन् । मुटु रोगीको उपचार गर्न आवश्यक पर्ने सबै उपकरणसहित टोली जुम्लामा पुगेको छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सकसँग मुटुको उपचार गराउन बिरामीलाई टोकन वितरण गरिएको छ । टोकन लिएर उपचार गराउने वातावरण सिर्जना गरिएको हो । पहिलो दिनमा ८ सयभन्दा बढी बिरामीको उपचार गरिएको छ । बिहान ६ देखि साँझ ७ बजेसम्म पनि शिविर सञ्चालन भएको आयोजकले बताएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७४ १२:४३
एकैपटक ३० सचिवको सरुवा
काठमाडौँ — सरकारले एकैपटक विभिन्न मन्त्रालय र निकायका ३० सचिवलाई सरुवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव सरुवाको निर्णय गरेको हो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रहेका ४८ सचिवमध्ये एकैपटक ३० जनाको सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा र शिक्षा सचिव मधु रेग्मीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवद्वय प्रेमकुमार राई र खगराज बराललाई क्रमश: गृह तथा शिक्षा मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
अर्थ सचिव शंकर अधिकारीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा लगिएको छ भने अख्तियार सचिव राजन खनाललाई अर्थसचिव बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा र सञ्चार सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अख्तियारमा लगिएको छ । रक्षा सचिव विनोद केसीलाई राष्ट्रपति कार्यालय सरुवा गरिएको छ भने त्यहाँ योजना आयोगका सचिव विष्णु लम्साललाई ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका शरदचन्द्र पौडेललाई योजना आयोग लगिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (आपूर्ति) अनिल ठाकुरलाई महिला आयोगमा सारिएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सारिएको छ । ट्रस्टका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा लगिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । वन सचिव युवकध्वज जीसीलाई कृषि मन्त्रालय र त्यहाँका सचिव (पशुपन्छी) विश्वनाथ ओलीलाई वन मन्त्रालय लगिएको छ ।
प्रदेश १ का कामु मुख्यसचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेललाई सूचना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव कृष्णराज बीसीलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका गजेन्द्र ठाकुरलाई शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि सचिवमा सारिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि सचिव सञ्जय शर्मालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्र तथा तिनका पहुँचवाला नेताका निकट सचिवलाई छानीछानी ‘आकर्षक’ र ‘पावरफुल’ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा आकर्षक र पावरफुल मन्त्रालयमा रहेका कांग्रेस र तिनका पहुँचवाला निकट सचिवलाई भने दायित्व कम भएका निकायमा थन्क्याइएको छ ।
शक्तिशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टी निकटमात्र नभई आफूले भनेको हुबहु मान्ने सचिवहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याएका छन् । कतिपय मन्त्रीले भने आफ्नो जिल्ला या भेगका सचिवलाई ल्याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले धेरै सचिवलाई एमाले र माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनको सिफारिसमा राम्रा मन्त्रालयमा लगेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र विभिन्न साना निकायमा थन्क्याइएका सचिवहरूले यस पटक आकर्षक मन्त्रालय पाएका छन् ।
को कहाँ ?
विनोद केसी - राष्ट्रपति कार्यालय
शंकरप्रसाद अधिकारी - उपराष्ट्रपति कार्यालय
केदारबहादुर अधिकारी -प्रधानमन्त्री कार्यालय
लालशंकर घिमिरे - प्रधानमन्त्री कार्यालय
लक्ष्मणप्रसाद मैनाली - प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
महेन्द्रमान गुरुङ - सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय
मोहनकृष्ण सापकोटा- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
प्रेमकुमार राई - गृहमन्त्रालय
राजन खनाल - अर्थ मन्त्रालय
महेश्वर न्यौपाने - अख्तियार
देवेन्द्र कार्की - नेपाल ट्रष्टको कार्यालय
अर्जुनकुमार कार्की - राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण
खगराज बराल - शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि
मधुप्रसाद रेग्मी - सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय
महेश दाहाल - श्रम तथा रोजगार
मधुसुदन अधिकारी - भौतिक मन्त्रालय
युवकध्वज जिसी - कृषि
विश्वनाथ ओली - वन
अनिल ठाकुर - महिला आयोग
कृष्णराज बिसी - खानेपानी
गजेन्द्रकुमार ठाकुर - शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि
सञ्जय शर्मा - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
शरदचन्द्र पौडेल - राष्ट्रिय योजना आयोग
विष्णुप्रसाद लम्साल - रक्षा
भूपेन्द्रप्रसाद पौडेल -राष्ट्रिय सूचना आयोग
यादवप्रसाद कोइराला - काठमाडौं महानगरपालिका
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७४ १२:२६